भाइटीकाको उपहारमा बार्गेनिङ हुँदैन - तिहार - साप्ताहिक
तिहार कत्तिको लागेको छ ?
गत मंगलबारदेखि नै तिहारको रमझम प्रारम्भ भैसकेको छ । त्यसै पनि मलाई तिहार सबैभन्दा मन पर्ने पर्व भएकाले अहिले म फेस्टिभ मुडमा छु ।
तिहार मनपर्ने कारण के हो ?
हाम्रा अन्य पर्वहरूमा जनावरको बलीलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तिहार मात्र यस्तो एउटा पर्व हो, जसमा जनावरको पूजा गरिन्छ । त्यसकारण पनि मलाई यो पर्व विशेष लाग्छ ।
तिहारको कुन दिन विशेष लाग्छ ?
तिहारका पाँचै दिन उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यद्यपि मलाई लक्ष्मीपूजा र भाइटीकाको दिन विशेष लाग्छ ।
भाइटीकाको दिन कति जनालाई टीका लगाइदिनुहुन्छ ?
एक जना मात्र भाइ (बिम्ब अधिकारी) छ । अघिल्ला दुई वर्षको भाइटीकामा भाइलाई टीका लगाइदिन पाएकी थिइन् । त्यसैले यसपटकको भाइटीका अझ विशेष हुनेछ ।
उपहारमा कत्तिको बार्गेनिङ चल्छ ?
मेरो भाइ प्यारो छ, त्यसैले बार्गेनिङ गरिरहनु पर्दैन । भाइले मलाई पैसा नै दिन्छ (आमाले दिएको), म उसैलाई मनपर्ने कुरा उपहार दिन्छु ।
निर्मात्री हुन लागिएछ, कस्तो चलचित्र बनाउन लागेको ?
कोहलपुर एक्सप्रेस शीर्षकको चलचित्र निर्माण गर्दैछु । तिहारलगत्तै छायांकन प्रारम्भ हुने यो चलचित्रमा कोहलपुरमा घटेको एउटा घटनालाई चित्रण गरिनेछ ।
चलचित्र ऐश्वर्यको प्रचार–प्रसारमा साथ नदिएको चर्चा छ नि ?
त्यस्तो होइन । आफूले अभिनय गरेका हरेक चलचित्रको प्रसार–प्रसारमा म उपलब्ध भैरहेकी हुन्छु । ऐश्वर्यको युनिटले नयाँ अभिनेत्रीलाई ब्रान्डिङ गर्ने निर्णय गरेकाले सहमतिअनुसार नै म प्रचार–प्रसारमा अघि नबढेकी हुँ ।
ऐश्वर्यमा तपाईंको भूमिका कस्तो छ ?
मैले रानी नाम भएकी युवतीको चरित्र निर्वाह गरेकी छु, जो स्वतन्त्रता चाहन्छे । मेरो भूमिकामा चलचित्रको सस्पेन्स लुकेकाले सबै कुरा अहिले नै बताउन मिल्दैन । चलचित्र हेरेपछि दर्शकले रानीलाई आफ्नो मनमा बसाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा ढुक्क छु ।
आँखा चिम्लेर प्रेम गर्नु हुँदैन
अपराधीहरू कुनै हालतमा उम्किनु हुँदैन
यौनसम्पर्क गर्दा लिंग कडा हुँदैन
सेलरोटी पकाएपछि आउने बास्ना मन पर्छ
तिहारका यी सामग्री : नभै हुँदैन
तिहारका रोचक र अनौठा तथ्य कार्तिक २१, २०७५
फूलमाला कार्तिक २०, २०७५
अब ग्रिन पटाका कार्तिक २०, २०७५
गार्डेनिङमा विविधता कार्तिक १९, २०७५
लुक्स फर दीपावली नाइट कार्तिक १८, २०७५
दियो बाल्दा विचार गर्नुहोस् कार्तिक १८, २०७५
यस पटकका तिहार गीत कार्तिक १७, २०७५
विदेशमा तिहारको रमझम कार्तिक १७, २०७५
नङ र मासुजस्ता डा. नवीन र डा. नविता कार्तिक ४, २०७४
दिदी समाका कारण लाइनमा आएका श्रेयस कार्तिक ४, २०७४